Yuchai ဒီဇယ်မီးစက်အမျိုးအစား - Mecca Power
နေအိမ် / သတင်း / သတင်း / Yuchai ဒီဇယ်ထုတ်လုပ်သူအမျိုးအစား
views:0 Author:ဆိုက်ကို Editor ကို အချိန် Publish: 2021-10-04 မူလ:ဆိုက်ကို
Yuchai Diesel Generator Sets အမျိုးမျိုးတွင်အောက်ပါအကြောင်းအရာများတွင်အသေးစိတ်မိတ်ဆက်ပေးလိမ့်မည်။ ၎င်းကိုအောက်ပါအကြောင်းအရာများတွင်အသေးစိတ်မိတ်ဆက်ပေးလိမ့်မည်။
Yuchai Diesel Generator အစုံများသည်၎င်းတို့ထိန်းချုပ်ထားသည့်အတိုင်းခွဲခြားသတ်မှတ်ထားသည့်အတိုင်းခွဲခြားထားသည်
1, Yuchaiဒီဇယ်မီးစက်အစုံဘုံအဘို့ - ဒီယျတျောယျဝိတ်ဒီဇယ်ထွန်းလင်းရေးသည်နှစ်တစ်နှစ်ပတ်လုံးလည်ပတ်သည်။ ယေဘုယျအားဖြင့်၎င်းနေရာများတွင်ဆောက်လုပ်ခြင်း, လျှပ်စစ်ဓာတ်အားကွန်ယက်များဆောက်လုပ်ခြင်းကြောင့်စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်အတူစီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်အတူဒေသများတွင်။ ဤအမျိုးအစားသည်ယေဘုယျအားဖြင့်စွမ်းဆောင်ရည်ကြီးမားသောစွမ်းဆောင်ရည်ကြီးမားသည်, ၎င်း၏ရှည်လျားသောအချိန်နှင့်လေးလံသောဝန်ကြောင့်ဤကဲ့သို့သောယူနစ်မျိုးသည်ဇာတိကန့်သတ်ပိုင်ခွင့်၏ခွင့်ပြုထားသောစွမ်းအားနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကနိမ့်ကျသောအချက်ကိုချိန်ညှိထားသည်။
Yuchai ဒီဇယ်မီးစက်အစုံဆက်သွယ်ရေးကဏ္, များ, ဆေးရုံများ, စက်မှုနှင့်သတ္တုတူးဖော်ရေးလုပ်ငန်းများတင်းကျပ်သောစည်ပင်သာယာလျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးစက်ရုံများ, လေဆိပ်များနှင့်ရုပ်မြင်သံကြားဘူတာများဖြင့်ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းများ,
3. Yuchai ဒီဇယ်မီးစက်အရေးပေါ်အခြေအနေ
Yuchai Diesel Generator Set သည် Mains Power ၏ရုတ်တရက်ပြတ်တောက်မှုနှင့်အလျင်အမြန်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်ရန်နှင့်0န်ဆောင်မှုသို့0န်ဆောင်မှုပေးရန်အလျင်အမြန်ပြုလုပ်နိုင်သည် အလိုအလျောက်လိုအပ်ချက်များကိုချထားပါ။ အဓိကအားဖြင့်မြင့်မားသောအဆောက်အအုံများအမြင့်အဆောက်အအုံများ, ကယ်ဆယ်ရေးအလင်းရောင်, ဓာတ်လှေကားများ, ဓာတ်လှေကားများ, ဓာတ်လှေကားများ, ဓာတ်လှေကားများ,
1. Generator Set ၏0က်ဘ်ဆိုက်မှလုပ်ငန်းလည်ပတ်မှု - Yuchai ဒီဇယ်မီးခေတ်အင်ဂျင်ခန်းတွင်အော်ပရေတာများသည် စတင်. အနီးကပ်, မြန်ခြင်း,
2 အင်ဂျင်ခန်းရှိယူနစ်စောင့်ကြည့်လေ့လာမှု၏ operating parameters များနှင့်အင်ဂျင်ခန်းရှိအရန်စက်သည်ဗဟိုထိန်းချုပ်မှုကိုအကောင်အထည်ဖော်သည်။
3 ပါဝါထောက်ပံ့ရေးအစား 10-15s ထောက်ပံ့။
အပေြာင်းYuchai ဒီဇယ်ထုတ်လုပ်သူMECCA POWER ၏အရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်များထုတ်လုပ်ရန်ကုမ္ပဏီမှမထွက်ခွာမီစမ်းသပ်ခြင်းများစွာပြုလုပ်ခဲ့သည်။ Yuchai Diesel Generator အစုံအမျိုးမျိုးကိုသင့်အားပေးရန်သင်နှင့်အတူအလုပ်လုပ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့မျှော်လင့်နေပါသည်။
Yuchai ဒီဇယ်ထုတ်လုပ်သူ ရေစိုခံ Diesel Generator မီးစက်လွယ်ကူသောပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု 110kva ဒီဇယ်ဆီထုတ်လုပ်သူ ဘိလပ်မြေစက်ရုံအတွက်ဒီဇယ်မီးစက် ရော့ခ်သိုးမွှေးနှင့်အတူမီးစက် 1500rpm ဒီဇယ်ဆီထုတ်လုပ်သူ